Saint Petersburg State University Iinkcukacha
isixeko : Saint Petersburg
Zifumaneke : 1724
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Saint Petersburg State University
Ukubhalisa kwi Saint Petersburg State University
Kuba ngaphezu 290 kwiminyaka, St. University Petersburg lenziwe kwinzululwazi phambili, adala ulwazi loqeqesho kwiingcali ebalaseleyo. IDyunivesithi esisityebi embalini - nto labhalwa emva 1724, xa uPetros Omkhulu Academy of Sciences and Arts kwakunye yokuqala Academic University eRashiya.
Beminyaka odumileyo SPbU angumthombo likratshi kunye nesidima, likhuthaze ukuba bahlabele kwaye kwandiswe amandla ethu kuphando kunye nemfundo. Phakathi abagqwesileyo nabasebenzi, kukho inani engaqhelekanga yabantu kwihlabathi-edumileyo, ukuthi ngqo, Nobel Prize abaphumeleleyo: physiologist Ivan Pavlov, sebhayoloji iikulya Mechnikov, machiza emzimbeni Nikolay Semyonov, zamachiza Lev Andau and Aleksandr Prokhorov, sobulumko yezoqoqosho Leonid Kantorovich. SPbU kwakhona mater alma kubaphandi ebalaseleyo, abaphengululi, izifundiswa, iinkokheli zopolitiko nezentlalo: Dmitry Mendeleev, Vladimir Vernadsky, kwaye Dmitry Likhachev igama kodwa ezimbalwa. Ihlabathi esendalweni University iinkokheli zethu nezona ziphambili yenkcubeko, ababhali kunye namagcisa: Ivan Turgenev, Pavel Bryullov, Alexander Blok, Alexander Benois, Sergei Diaghilev kunye Igor Stravinsky. Phakathi alumni kwiYunivesithi, nathi Siyazingca ukukhankanya neenkokeli kaRhulumente Russian: Boris Phambili, Alexander Kerensky, Vladimir Lenin, AbabengooMongameli be-Russian Federation Vladimir Putin and Dmitry Medvedev.
namhlanje, kwiinkulungwane ezintathu emva yasekwa ngayo, Station Gas abazamayo, ngokuba phambi, ukukhokela uphando kunye nemfundo kwisikeyile yesizwe jikelele. Ngokuzidibanisa kunye nezithethe kunye ezintsha, St. Petersburg University kucwangcisa isantya sophuhliso inzululwazi, zemfundo nenkcubeko eRashiya kunye nehlabathi liphela.
SPbU usixhobisa ngokupheleleyo abafundi alo nabasebenzi ngenxa intle kuluhlu olwahlukahlukeneyo amathuba emfundo, uphando kunye nophuhliso buqu: le Library Research ityebileyo zithiywe M. Gorky, yimeko-of-the-art Research Park, iilebhu ekhokelwa zizazinzulu aphambili, olondolozo lwembali, indlu epapasha, iiklabhu zemidlalo, ikwayala University, okhestra, idrama dance okurekhodisha njalo.
ngoNovemba 2009, Umongameli Russian Federation Dmitry Medvedev watyikitya umthetho enika St. Petersburg University kunye Moscow State University iwonga ekhethekileyo 'izakhiwo yenzululwazi kunye zemfundo ezizodwa, amaziko zindala emfundo ephakamileyo eRashiya ukuba kubaluleke kakhulu kuphuhliso loluntu Russian '. SPbU wanikwa ilungelo lokumisela imilinganiselo yayo yemfundo kuwanika iidiploma yayo.
Bhaqa Russian University kuqala ngoku.
Wamkelekile kwi zokutha ipetroli!
kwisikhululo segesi Ngqonyela
yasekwa ngonyaka ka 1724 nguPetros Omkhulu, Saint Petersburg University wayeza kuba liziko lokuqala lemfundo ephakamileyo eRashiya. SPbU yi enqenqeza Russian nokufundisa kunye nokugqwesa uphando ubalwa phakathi kwiiyunivesithi phezulu ehlabathini. Thina zivulelekile intsebenziswano kunye nokonwabela ubuhlobo obuqinileyo kunye zophando lwamazwe ngamazwe kunye noluntu emfundo. izazinzulu SPbU asebenze phantse zonke iinkalo zolwazi, ngokubonelela ubuchule kunye yokubonisana ngentsebenziswano namaqabane Russian ngamazwe. Abaphengululi abaninzi abalaseleyo ukuba yinxalenye yoluntu SPbU, kuquka ezilithoba Nobel Prize abaphumeleleyo: le physiologist Ivan Pavlov, sebhayoloji iikulya Mechnikov, ugqirha kunye yemichiza Nikolay Semyonov, zamachiza Lev Andau and Aleksandr Prokhorov, sobulumko yezoqoqosho Wassily Leontief kwakunye yezibalo kunye yezoqoqosho Leonid Kantorovich.
Phakathi University alumni ke uMongameli Russian Federation Vladimir Putin, Prime-uMphathiswa Dmitry Medvedev, UMlawuli Hermitage Mikhail Piotrovskiy, UMongameli Russian Academy of Education udmila Verbitskaya, bezibalo Grigoriy Perelman and USergey uSmirnov kwakunye nabanye abaninzi.
St. Petersburg University Namhlanje
106 iinkqubo zesidanga
205 iinkqubo enkosini neendawo obungcali
263 iinkqubo isidanga sobugqirha
29 neenkqubo zabemi zonyango
abafundi abavela phezu 70 amazwe
phezu 3 000 abafundi ngamazwe kwiinkqubo degree and non-isidanga
350 kwiiyunivesithi iqabane
eyunivesithi games Research Park eRashiya
7,000,000 iincwadi ekuqokelelweni kwiYunivesithi Research Library
idiploma esikhutshwe Russian kwaye IsiNgesi
12,800 iindawo amaholo ahlala
inxaxheba umfundi inxaxheba kwinkqubo yemfundo;
ekuqondeni eyona ezinokwenzeka yomfundi ngamnye;
Luphefumla - European Credit yokuGqithisela System;
emfundo ziyilelwe ngokwimiselo yemodyuli;
iinkqubo zotshintshiselwano umfundi neeyunivesithi neqabane
internships no kubekwa umsebenzi kwiinkampani aphambili Russian ngamazwe;
ukufikelela kwizibonelelo zophando esisodwa, ubugcisa kunye full-text edatha;
ubuchwepheshe zemfundo namhlanje;
Imeko-of-the-art izixhobo zophando;
yokufunda urhulumente kuba izicelo ngamazwe eyona ekhethiweyo (zokufunda simahla yokuhlala dicsounted);
ithuba kakuhle Russian kwi-Institute of Language Russian neNkcubeko.
Faculty of Applied Mathematics neeNkqubo Control
YeFakhalthi Dentistry kunye Medical Technology
Faculty of Lutho Arts and Sciences
Faculty of Mathematics and Boomatshini
Faculty of Science Political
School of ubuntatheli Ubunzima Communications
Oku phikiswa yolawulo eyunivesithi ke ukuba Saint Petersburg State University okanye Moscow State University Liziko indala lemfundo ephakamileyo eRashiya. Ngoxa olwesibini yasekwa 1755, edlule, leyo isebenza gqolo ukususela 1819, ubanga ukuba ezihlangwini yedyunivesithi esekwe kunye Academic Gymnasium kunye Saint Petersburg Academy of Sciences ngoJanuwari 24, 1724 yangummiselo kaPeter Great.
Kwi sithuba phakathi 1804 yaye 1819, Saint Petersburg University ngokusemthethweni belungekho; iziko esasekwa uPetros Omkhulu, le Saint Petersburg Academy, sele apheliswe, kuba esitsha 1803 charter ye Academy of Sciences kuchaziwe ukuba kufanele kungabikho amaziko emfundo baseyinxalenye nayo.
The Petersburg kwindlela ekufundiswa Institute, labizwa Main ekufundiswa ngayo Institute 1814, yasekwa 1804 awuthimba inxalenye yesakhiwo ezilishumi Collegia. ngoFebruwari 8, 1819 (O.s.), Alexander I weRashiya hlengise Main ekufundiswa ngayo Institute ukuya Saint Petersburg University, ngelo xesha yayibandakanya amandla ezintathu: Faculty of Philosophy kunye noMthetho, Faculty of History and Philology kunye Faculty of Physics and Mathematics. The Main ekufundiswa ngayo Institute (apho Dmitri Mendeleev wafunda) lubuyiselwe 1828 ngokuba liziko elizimeleyo kwezemfundo Saint Petersburg University, nabaqeqeshiweyo ootitshala de ekugqibeleni yavalwa 1859.
in 1821 yunivesithi labizwa Saint Petersburg Imperial University. in 1823 uninzi yunivesithi bafuduka Abalishumi Collegia ukuya emazantsi umzi ngaphaya Fontanka. in 1824 inguqulelo sobalo zikasomqulu University eMoscow yamkelwa njengoko Charter yokuqala Saint Petersburg Imperial University. in 1829 babe 19 oonjingalwazi ngokupheleleyo kwaye 169 abafundi abasisigxina kunye nenxalenye-ixesha kwiyunivesithi. in 1830 Tsar Nicholas wabuyela lonke ekwakhiweni abalishumi Collegia umva ukuya eyunivesithi, kunye nezifundo wayeyeke khona. in 1835 iTshatha olutsha Imperial Universities of eRashiya savunywa. Yandinika ngokusekwa Faculty of Law, -Faculty of History and Philology, kwaye lani Physics and Mathematics zahlanganiswa kungena Faculty of Philosophy njengoko 1 kunye namaSebe 2, ngokulandelana.
in 1849 emva Spring Lwezizwe yeeNgwevu yoBukhosi baseRashiya wayalela ukuba Ngqonyela kufuneka anyulwe nguMphathiswa Ulwazi National kunokuba anyulwe yiNdibano yedyunivesithi. kunjalo, Pyotr Pletnyov waye kwakhona Ngqonyela yaye ekugqibeleni waba kwinqununu elide-nokuphakwa Saint Petersburg University (1840-1861).
in 1855 izifundo Oriental bahlulwa-Faculty of History and Philology, kwaye edliwa yesine, YeFakhalthi Oriental Iilwimi, waye ngokusesikweni ngomhla Agasti 27, 1855.
Ngowe-1859-1861 nemazi abafundi abangesosigxina yokuya iintetho yunivesithi. in 1861 babe 1,270 elizeleyo ixesha 167 abafundi wesingxungxo yunivesithi, yabo 498 ezibe Faculty of Law, lwahlulo inkulu. Kodwa lo lwahlulo waba isebe izifundo cameral, apho abafundi bafunda ukhuseleko, kwimpilo emsebenzini kunye nolawulo nobunjineli lokusingqongileyo kunye nenzululwazi, kuquka chemistry, eziphilayo, zokuxelenga kunye nomthetho nentanda. uninzi Russian, etc Georgian. abaphathi, iinjineli izazinzulu wafunda kwi-Faculty of umthetho ngoko. Ngexesha 1861-1862 kukho izixholoxholo umfundi yunivesithi, kwaye wavalwa okwethutyana kabini ngonyaka. Abafundi banikwa lenkululeko yeendibano yaye zibekwe esweni amapolisa, kunye neentetho zoluntu babengavunyelwa. Abafundi abaninzi bagxothwa. Emva yombhodamo, e 1865, kuphela 524 abafundi bahlala.
Kwawiswa yoMlawuli Alexander II yaseRashiya yamkelwa ngomhla 18 EyoMdumba 1863 kwakhona ilungelo ibandla eyunivesithi ukunyula kwinqununu. Kwakhona kwasekwa edliwa entsha theory kunye nembali zobugcisa njengenxalenye yecandelo imbali philology.
ngoMatshi 1869, izixholoxholo umfundi lawuzamazamisayo eyunivesithi kwakhona kodwa luncinane. by 1869, 2,588 abafundi wayephumelele kwiYunivesithi.
in 1880 iSebe Ulwazi National wawukwalela abafundi ukuba batshate nabantu abatshatileyo ayikwazanga banokwamkelwa. in 1882 omnye izidubedube umfundi senzeka yunivesithi. in 1884 iTshatha entsha weeYunivesithi Imperial Russian yamkelwa, leyo wanikwa ilungelo lokumisela kwinqununu kuMphathiswa Ulwazi National kwakhona. ngoMatshi 1, 1887 (O.s.) iqela abafundi baseyunivesithi wabanjwa ngoxa ekucwangcisweni ilinge ubomi Alexander III yaseRashiya. Nje ngeziphumo, imithetho ukwamkelwa entsha zomthambo kunye neeyunivesithi evunyiweyo nguMphathiswa kaZwelonke Ulwazi Ivan Delyanov kwi 1887, leyo obiyelweyo ngabantu imvelaphi njengabo ukusuka ukwamkelwa eyunivesithi, ngaphandle kokuba abanetalente ngokungaqhelekanga.
by 1894, 9,212 abafundi wayephumelele kwiYunivesithi. Phakathi abaphengululi babizwe kwisiqingatha sesibini kwinkulungwane ye-19 anxulumeneyo kunye kwiyunivesithi yezibalo Pafnuty Chebyshev, ugqirha Heinrich Lenz, michiza Dmitri Mendeleev andAleksandr Butlerov, kweemveku Alexander Kovalevsky, physiologist Ivan Sechenov, Yomnxeba Vasily Dokuchaev. ngoMatshi 24, 1896 (O.s.), kwikhampasi yedyunivesithi Alexander Popov wabonisa ekuhleni ukudluliselwa amaza erediyo okokuqala kwimbali.
Ukususela ngoJanuwari 1, 1900 (O.s.), babe 2,099 labafundi ababhalise kwi-Faculty of Law, 1,149 abafundi kwi-Faculty of Physics and Mathematics, 212 abafundi kwi-Faculty of Oriental kweeLwimi 171 abafundi kwi-Faculty of History and Philology. in 1902 yokuqala iholo yokudlela umfundi eRashiya kwavulwa yunivesithi.
ukususela malunga 1897 uqhankqalazo rhoqo noqhushululu umfundi wanyikima idyunivesithi yandele kwamanye amaziko emfundo ephakamileyo kulo lonke Russia. Ngexesha Revolution of 1905 zikasomqulu yeedyunivesithi Russian izilungiso kwakhona, na ukuzimela kwiiyunivesithi wabuyiselwa ngokungaphelelanga kwaye unelungelo enyule kwinqununu yabuyiselwa kwibhodi academic okokuqala ukusukela 1884. Ngowe-1905-1906 yunivesithi yavalwa okwethutyana ngenxa izixholoxholo umfundi. ukuzimela kwayo lwayekwa kwakhona 1911. Kulo nyaka mnye waphinda singavalwa okwethutyana eyunivesithi.
in 1914 nokuvulwa leMfazwe yokuQala yeHlabathi, yunivesithi labizwa Petrograd Imperial University emva emzini wayo ugama. Ngexesha leMfazwe yunivesithi yaba liziko obalulekileyo nokuvuselelwa kwemithombo Russian ngokwasengqondweni mali yokufunda ukuze uloyiso. in 1915 isebe yunivesithi yavulwa Perm, apho kamva waba Perm State University. INdibano Petrograd Imperial University yamkele ngokuphandle Februwari Revolution of 1917, wawabekayo isiphelo ukumkani Russian, kunye neyunivesithi owabizwa ngokuba University Petrograd nje. kunjalo, emva October Revolution of 1917, abasebenzi kunye nolawulo yaseyunivesithi ekuqaleni kwebali oluchasene yamaBolshevik nokuthinjwa amandla emadolwanzima ukuba basebenzisane kunye Narkompros. Kamva 1917-1922 ngexesha Russian War Civil abanye abasebenzi ekrokrelwa usizi counter-revolution wabanjwa (e.g., Lev Shcherba kwi 1919), ukwenza, okanye abe selubhacweni kumazwe phezu ekuthiwa zobulumko’ baneenqanawa 1922 (e.g., Nikolai Lossky). koko, kwabasebenzi bonke ubunzima yindlala ngamahlwempu ngaloo minyaka.
in 1918 yunivesithi labizwa 1st Petrograd State University, yaye 1919 le Narkompros nesele kuyo kunye PSU 2 (owayesakuba Psychoneurological Institute) kunye PSU 3 (Courses yangaphambili Bestuzhev Higher for Women) kungena Petrograd State University. in 1919 -Faculty of Science Social yasekwa Narkompros endaweni Faculty of History and Philology, Faculty of Oriental kweeLwimi Faculty of Law. Nicholas Marr waba Dean wokuqala kwicandelo elitsha. Chemist Alexey Favorsky waba Dean eFalkhathi Physics and Mathematics. Rabfaks neyunivesithi ivideo iikhosi avuleka ngokusekelwe eyunivesithi ukubonelela ngemfundo ubunzima. Xa ukuwa 1920, njengoko ojongwe umfundi freshman Alice Rosenbaum, amanani ezivulekileyo uninzi yabafundi anti-yobukomanisi kuquka, de kususwa, ezimbalwa abachasi vidiyo wolawulo. Kubona ukuba ba ngokufundisa “iintshaba udidi”, umntu uthe wazikhuphulula lwaqhutywa kwi 1922 esekelwe kwisiqalo eklasini abafundi nabo bonke abafundi, ngaphandle seniors, kunye nemvelaphi abangekaphuhli sagxothwa.
in 1924 yunivesithi labizwa kwiLeningrad State University emva emzini wayo ugama. Ukuze kufihlwe inkcaso enomgangatho amandla eSoviet, inani mbali asebenza yunivesithi, kuquka USergey Platonov, Yevgeny Tarle kunye Boris Grekov, bavalelwa ekuthiwa-Umbandela Academic of 1929-1930 ngezityholo zobuxoki nenxaxheba ekhawuntaleni-revolution iyelenqe ejoliswe ukubhukuqa urhulumente. Ezinye namanye amalungu abasebenzi beyivalela ngo 1937-1938 ngexesha Likhupheni Enkulu.
Ngexesha 1941-1944 wokungqingwa eLeningrad kwiMfazwe Yehlabathi II, abaninzi abafundi nabasebenzi abafa yindlala, Okwemfazwe okanye repressions. kunjalo, yunivesithi utyando ngokuqhubekayo, bayakusiwa Yershov ngo 1942-1944. A isebe yunivesithi lwabanjwa Yelabuga ngexesha lemfazwe. in 1944 Elawulayo yeBhunga Ephakamileyo Soviet Union lawongwa yunivesithi kunye Order of uLenin kumsitho iminyaka yayo 125 kwaye ngegalelo layo kwinzululwazi nenkcubeko.
in 1948 iBhunga labaPhathiswa ogama eyunivesithi emva Andrei Zhdanov, igosa basekuhlaleni eliphambili kutshanje abangasekhoyo. Esi sigqibo lwayekwa kwi 1989 ngexesha Perestroika.
Ngowe-1949-1950 oonjingalwazi eziliqela wafa entolongweni ngexesha uphando kwiLeningrad Umbandela aziqweba bubunkokheli central yiSoviet, kunye noMphathiswa weMfundo ye RSFSR, owayesakuba Ngqonyela Alexander Voznesensky, wabulawa.
in 1966 iBhunga laBaphathiswa sagqiba ukwakha ikhampasi entsha ipoma in Petrodvorets kuba uninzi zemathematika amandla nenzululwazi yendalo. Ukutshintshelwa lani zigqitywe ngo-1990.
in 1969 Elawulayo yeBhunga Ephakamileyo Soviet Union lawongwa yunivesithi kunye IMbasa Red Banner of Labour.
in 1991 yunivesithi labizwa umva Saint Petersburg State University emva emzini wayo ugama.
Uyafuna ukuxoxa Saint Petersburg State University ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
iifoto: Saint Petersburg State University ezisemthethweni kwiFacebook
ncomo Saint Petersburg State University
Dibanisa ukuxoxa of Saint Petersburg State University.
Peoples’ Friendship University of Russia eMoscow